ဇနီးဖြစ်သူက မီးဖွားနေစဉ် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး ခုလည်း နှစ်ပတ်သာရှိသေးတဲ့ မွေးကင်းစသားလေးကိုလည်း နှုတ်ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားရပြန်တဲ့ ဖခင်တစ်ဦး - Mckzone Daily
ဇနီးဖြစ်သူက မီးဖွားနေစဉ် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး ခုလည်း နှစ်ပတ်သာရှိသေးတဲ့ မွေးကင်းစသားလေးကိုလည်း နှုတ်ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားရပြန်တဲ့ ဖခင်တစ်ဦး
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပတ်ခန့်က အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ဇနီးသည်ဟာ ခက်ခဲစွာ ကလေးမီးဖွားနေစဉ်အတွင်း ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဖခင်အသစ်စက်စက်ဖြစ်တဲ့ အဆိုပါ Matthew Accurso အမည်ရှိအမျိုးသားဟာ သူ့ရဲ့မွေးကင်းစသားလေးကိုလည်း ထပ်မံ နှုတ်ဆက်ရပြန်ပါတော့မယ်။ အဆိုပါ Baby Matthew လေးဟာ သူ့မိခင် Lauren Accurso ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက် Wolfson ကလေးဆေးရုံရှိ NICU ( မွေးကင်းစကလေး အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် )၌ နှစ်ပတ်ကြာအောင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရပါတယ်။ အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် မိခင် Lauren ဟာ Matthew လေးကို မွေးဖွားစဉ်မှာ ရှားပါးသော ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ရပ်ရှိခဲ့ကြောင်း Action News Jax က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
NICU တွင် နှစ်ပတ်နီးပါးကြာပြီးနောက် နောက်ဆုံးမှာ မွေးကင်းစကလေးငယ်လေးဟာ တိုးတက်မှု လက္ခဏာများ အနည်းငယ် ပြသလာခဲ့ပြီး ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဖခင် Matthew ဟာ သူ့ရဲ့မွေးကင်းစသားလေးကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ကလေးလေး Matthew ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေက တိုးတက်နေပေမယ့် အံ့ဖွယ်စရာတွေဖြစ်လာဖို့အတွက် မိသားစုဝင်များက ဆုတောင်းပေးနေကြတုန်းပါပဲ။
ဖခင်ဖြစ်သူ Matthew ဟာ မကြာသေးမီက “ ကျွန်တော့်ရဲ့အံ့ဖွယ်အမှုက ကျွန်တော့်သားလေးကို အဖိုးတန်တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေနဲ့အတူ အတတ်နိုင်ဆုံး ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ပါဘဲ ၊ အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျ့ရင် သူ့ကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပွေ့ဖက်နိုင်ဖို့ ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေတဲ့ သူ့အမေဆီ ပို့ပေးမယ် ” ၊
“ Matthew လေးနဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေအားလုံးကိုပေးနေကြတဲ့ လူတိုင်းကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Matthew လေးရဲ့အနားမှာ အချိုသာဆုံး မိသားစုအချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာက ဆုတောင်းပေးကြသူအားလုံးကြောင့်ပါဘဲ ၊ ဆရာဝန်တွေ ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပြီး ၊
Matthew လေးကို သူ့အမေနဲ့ ကောင်းကင်ဘုံရှင်ခမည်းတော်ထံ သွားတွေ့ဖို့ စီစဉ်ထားပြီးထားဖြစ်တဲ့အတွက် လာမယ့်ရက်တွေမှာ မင်းတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေအတွက် ကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်နေမိမယ်ထင်တယ် ” ဟု ဖခင်ဖြစ်သူက ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အသုံးပြုသူ Amber Krycka မှ Twitter တွင် မျှဝေထားသော ကြေကွဲဖွယ် ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ ဖခင်ဖြစ်သူ Matthew က အိပ်ပျော်နေတဲ့ မွေးကင်းစသားငယ်လေးအား “ ဘာလုပ်နေလဲ? သားလေး ဘာကို အိပ်မက်မက်နေတာလဲ? သားလေးရဲ့အမေ့အကြောင်းကို အိပ်မက်မက်နေတာလား။ ” ဟု မေးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်။
Be the first to comment on "ဇနီးဖြစ်သူက မီးဖွားနေစဉ် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး ခုလည်း နှစ်ပတ်သာရှိသေးတဲ့ မွေးကင်းစသားလေးကိုလည်း နှုတ်ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားရပြန်တဲ့ ဖခင်တစ်ဦး"